Soomaaliya-Kenya ICJ: Afar qodob oo qareenada Soomaaliya ee ICJ ay diiradda saareen dooddii bishii March | Dayniile.com
Home Warkii Soomaaliya-Kenya ICJ: Afar qodob oo qareenada Soomaaliya ee ICJ ay diiradda saareen...
Soomaaliya-Kenya ICJ: Afar qodob oo qareenada Soomaaliya ee ICJ ay diiradda saareen dooddii bishii March
Waxaa shalay magaalada Hague ee dalka Holland go’aankii ugu dambeeyay looga gaaray kiiska badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo kenya.
Uhuru Kenyatta, ayaa ka digay in go’aanka Maxkamadda ICJ ay inta badan baddii lagu muransanaa ay ku siisayay Soomaaliya uu waxyeelayn doono xiriirkii ka dhaxeeya labada dal.
Balse madaxda Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay go’aanka ICJ. Madaweynaha Somaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay in go’aanka ka soo baxey Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda, ee ku saabsanaa muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, uu yahay mid caddaaalad ah.
Bishii March ee sannadkan, xilligii ay socotay dhageysigii ugu dambeeyay ee maxkamadda ay ku maqleysay dacwadda iyo sheegashooyiinka labada dal, waxay qareennada Soomaaliya ku soo bandhigeen arrimo kala duwan, labadii maalmood ee ay ka hor hadlayeen ICJ. Balse Kenya ayaa fadhigaas ka qeybgalin, wayna qaadacday.
Qaar ka mid ah qodobada ay qareenada Soomaaliya ka hadleen:
1. Is-fahankii 2009-kii (MOU)
Mid ka mid ah qareennada Soomaaliya, Philippe Sands, oo Shuruucda caalamiga ah ka dhiga University College London, ayaa qodobkan ku billaabay, wuxuuna sheegay in is fahankii ay labada dal kala saxiixdeen sannadkii 2009-kii, uusan wax khilaaf ah ku ahayn dacwadda.
Wuxuu sheegay in isfahamkaas uu ka mid ahaa qodobbada ay Kenya illaa iyo hadda cuskaneyso.
Qoraalka sawirka,Sida ay xukuntay maxkamadda ICJ
Dowladdii Kumeel Gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa kala saxiixday isfahan la xiriiray xadka badda ee labada dhinac.
Isfahamkaas waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxman Cabdishakur, oo xilligaasi ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah.
Is afgaradkaas kuma jirin arrinta la xiriirta xadka badda, balse wuxuu dhigayay hannaankii loo mari lahaa oo ah in wadahadal lagu xalliyo khilaafka xadka badda ee laba dal u dhexeeya.
August 1, 2009: – Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer ka dib, aqlabiyad ballaaran ugu codeeyay in la laalo heshiiska is afgaradka ahaa ee dhex maray Soomaaliya iyo Kenya.
Kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen ayay Baaramaanka gebi ahaanba ku diideen in xitaa doodda ku saabsan arrintan dib loo dhigo, oo ‘wasiirka arrintan khuseyso la siiyo fursad uu ku faahfaahiyo heshiiska’.
2. Warbixinnada iska hor imaanaya ee ay Kenya maxkamadda gaysay
Qareenka ayaa sidoo kale ka hadlay in warbixinno iska hor imaanaya ay Kenya maxkamadda ka jeedisay intii uu kiiskan socday.
“Hadallo is khilaafsan ayay hore ugu sheegtay Maxkamadan. Dib u cusboonaysiinteeda, Kenya waxay ku doodeysaa in dhinacyada ay xaddideen soohdintooda iyagoo raalli ka ah muddo dheer ka hor, inta aysan Soomaaliya dacwadeeda gudbin ka hor.” Ayuu yiri qareenka.
Kenya waxay si isdaba joog ah maxkamadda ugu sheegtay in dhinacyada ay si cad isugu raaceen in xudduudda badahooda.
Soohdinta waxaa xadeyn doona mustaqbalka geedi socodka gorgortanka.
Sida ay ICJ u diiday sheegashadii Kenya ee muranka xuduudda badda Soomaaliya
15-ka garsoore ee gaaray go’aanka dacwaddii badda Soomaaliya iyo Kenya
Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee sannadkii 2014-kii, maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.
Baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100km oo isku wareeg ah.
Makhaayaddii ay ka billaabatay dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Wargeyska East African: Sababta uusan go’aanka ICJ xal ugu noqon karin muranka Kenya iyo Soomaaliya
Bishii December 2017 ayey Kenya xareysay jawaabteedii ay ka bixineysay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.
Xeerilaaliyaha Guud ee Kenya wuxuu ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn in ay go’aan ka gaarto kiiskan. Wuxuu codsaday in arrintan ay labada dal ku xalliyaan wadahadal.
Bishii July ee sannadkii 2015-kii, ayey dowladda Soomaaliya si rasmi ah maxkamadda ICJ ugu gudbisay dacwadda ku saabsan muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya.
Xilligaas ka hor waxaa marxalado badan laga soo maray sidii kiiska loo geyn lahaa maxkamadda.
3. Hadalkii Kenya ee Soomaaliya intii wadaxaajoodka uu socday
Qareenka ayaa ku doodaya in hadalladii Kenya ay sheegtay intii ay socdeen wadahadaladii laba geesoodka ahaa ee ay la galeen Soomaaliya, sanadihii 2013 iyo 2014, aysan noqon kuwa caawiyay.
“Xaqiiqda dhabta ah ee gorgortanku dhacay, iyo maqnaanshaha tixraac ku saabsan soohdinta lagu aasaasay raalli ahaanshaha intii lagu jiray wadaxaajoodyadaas, waa mid muhiim ah.” Ayuu yiri Qareenka.
“Faahfaahinta wadaxaajoodka Kenya iyo Soomaaliya waxay caddeynaysaa in labada dhinac midkoodna aaminsan yahay in ay jirto xuduudo la dejiyay oo aan ku saleysnayn raalli ahaansho iyo inaan loo marin dariiq kale.
Qoraalka sawirka,Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka Soomaliya, Mahdi Guuleed ayaa hoggaaminaya kooxda Soomaaliya
Bishii May 2013-kii, dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo saaray bayaan wadajir ah. Waxay ku micneeyeen in “labada Wasiir ay hoosta ka xarriiqeen baahida loo qabo in lagu shaqeeyo qaab-dhismeedka habsami u socodka howlaha badda kala xadidaya.”
Hadalkaas wadajirka ah “wuxuu si cad ula jaan qaadi karaa waxa ay rumeysan tahay Kenya ee cusub ee ah soohdinta badda ayaa horeyba u jirtay wakhti dheer, tan iyo markii si buuxda loo xadiday. Intii lagu gudajiray muddadii udhaxeysay Febraayo iyo Ogosto 2014-kii, waxay kulmeen laba jeer.
4. Sharciga Kenya ee ku saabsan xuduudaheeda badda ee ‘iska hor imaanaya’
Qareenka ayaa sheegay in hadallada Kenya ee soo noqnoqday ee ay u dirtay garsoorayaasha Maxkamadda ICJ iyo Soomaaliya lafteeda, ay yihiin kuwa muujinaya in uusan jirin xad sax ah.
Qareenka ayaa sidoo kale ku doodaya in sharciga Kenya uu qorayo xuduudda baddeeda ee 1989-kii, oo la sharciyeey kaas oo illaa iyo hadda shaqeeya. Waana sharciga loo gudbiyay hay’ad Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha badaha.
Previous articleTarjumaankii gacanta ka gaystay badbaadinta Madaxweyne Biden oo ka baxsaday Afghanistan
Next articleAskarta Waqqooyiga Korea oo dhoolatus ku sameeyey jabinta mutuleel iyo kala goynta silsilado bir ah
Boqor Buur-Madow: “ Rooble Iyo Beeshiisa Habargidir ayaan doorasha ka qabsan weenay, faraha ayaan kala baxnay Doorashadi Soomaalida ha ogaato”.
Puntland oo faah faahisay halka ay mareyso Nabadeynta beelo dagaalamay
Meydadka laba Ruux oo laga helay duleedka Gaalkacyo
Al-Shabaab oo soo bandhigay Askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen
Xuska maalinta Saxaafadda ee Soomaaliya (warbixin)
Ciidamada dowladda oo sheegay inay dib u qabsadeen Goor dhawayd xerada...
Wararka ka imaanaya deegaanka Daynunay ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in goor dhawayd Ciidamada Dowlada ay sheegeen in ay halkaas la wareegeen. Dagaal kooban...
Kulamo lagu xalinaayo Beelo dagaalamay oo ka billowday Gobolka Sool
Nin hubaysan oo dad ku laayey Qudus qaar kalena ku dhaawacay
Ra’iisul Wasaare Rooble oo caawa magacaabay guddi ka kooban shan wasiir...
Madaxweynaha Galmudug oo cafis u fidiyay sarkaal hub kala soo goostay...
Dowladda Mareykanka oo ugu baaqday dowladda federaalka in ay Wada hadal...
axmed shiikh - December 6, 2021 0